प्रचण्डलाई भेटेलगत्तै ईश्वर पोखरेल शीतल निवासमा - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं: उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल राष्ट्रपति निवास पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट सचिवालय सदस्य समेत रहेका पोखरेल केहीबेर अघि शीतल निवासमा पुगेका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पोखरेलले पार्टी विवादबारे कुरा गर्ने स्रोतले बताएको छ । उनी ओलीको दुत बनेर शितल निवास गएको बुझिएको छ ।
यसअघि पोखरेलले शुक्रबार बिहान कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटारमा भेटेका थिए । सो क्रममा पोखरेलले प्रचण्डसँग साझा प्रस्तावको लागि आग्रह गरेको बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेकपा विवादमा नाटकीय रूपमा ब्रेक !
याे पनि पढ्नुस राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन लागिएको हो ? यस्तो भन्छन् नेकपा प्रवक्ता
त्यसैका लागि बिहीबार ओली पक्षका नेताहरू महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री ओलीले दिए चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना
बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेकी थिइन् ।
ट्याग्स: ईश्वर पोखरेल, केपी शर्मा ओली, नेकपा, प्रचण्ड, विद्यादेवी भण्डारी